theZOMI: Burma News International - April 29, 2013
Burma News International - April 29, 2013
Shwe gas pipelines loosely connected, say worried Shan farmers
Shan farmers from Namkham,aSino-Burma border town in northern Shan State, are voicing concern over the gas pipelines linking to China that have appeared to have some holes or loosely connected, according to local news sources.
Suu Kyi attends Mongolian summit
Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi arrived in Mongolia on Sunday to participate in the 7th Ministerial Conference of Community of Democracies (CoD).
ရခိုင်ပင်လယ်ပြင် ငါးမ်းခွင့် ခေတ္တပိတ်မည်
လာမည့် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနိုင်မည့် မီဒီယာဥပဒေတွင် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပေးရန် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် တိုင်းရင်းမီဒီယာများ ညီလာခံက တောင်းဆိုလိုက်သည်။
မလေးရှားရောက် မွန်လူမျိုးများ ပထမဆုံးအကြိမ် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲလုပ်
ယမန်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မွန်လူမျိုးများ အားလုံး ကိုယ်စားပြုနိုင်သော စုပေါင်းမွန်အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက် ပထမအကြိမ် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတရပ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ၊ ပူတူရပ်ကွက် ဟံသာဝတီဆိုင်တွင် ကျင်ပခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ကိုဥက္ကာမန်က ပြေသည်။
ကရင်လက်ကိုင်အုပ်စုကြား တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ချင်းလူထုနှင့်ဆက်တိုက်တွေ့ ဆုံ
Last Updated on အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ 30 ရက် 2013 ခုနှစ်